Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Imidlalo ye-TV Eyintandokazi ka-Brits Manje Isifaka Isandla Ekusuleni Okukhulu
Ucwaningo olusha kanye nombono wochwepheshe otholwe ku-FutureLearn.com ugqamisa indlela i-TV nokusakaza-bukhoma okungabakhuthaza ngayo amaBrits ukuthi enze ukukhetha okuhlukile kwemisebenzi nokuthi isiko lomculo we-pop liqhubeka lithonya kanjani ezemfundo, ukuqeqeshwa kanye nemisebenzi.
Ukuvalwa kwezindawo eziningi nokusebenza ekhaya kuholele ekutheni amaBrits amaningi abe nesikhathi esengeziwe sokuzitika ngohlelo lwe-TV futhi manje, ucwaningo olusha oluvela ku-FutureLearn luveza ukuthi banomthelela kanjani kulokho abantu abafuna ukufunda ngakho kanye nezindlela zabo zemisebenzi ezingaba khona nokukhetha kwabo.
Cishe izingxenye ezimbili kwezinhlanu (39%) zama-Brits akhangwe uBridgerton ofaneleka ukuzitika ngezincwadi zakhe zakudala, i-Squid Game ngokuxazulula izinkinga zayo okuthakazelisayo (33%) kanye ne-After Life ngendlela yayo yosizi (40%), kungase kube nokunye okwengeziwe. ezithakazelweni zesizwe kanye nalokho abagqama ngakho emsebenzini wabo. Ngabe izinhlelo ze-TV ezibamba i-UK zisho okuningi ngamaBrits kunalokho abebekucabanga, futhi kungenzeka yini ukuthi lesi kungaba yisizathu sokusula okukhulu njengoba sikwazi njengamanje?
Njengoba i-The Great Resignation iqhubeka nokuluma futhi ama-Brits ezizwa engaqiniseki ngezindlela zabo zemisebenzi, ucwaningo olusha oluvela kunkundla yemfundo ye-inthanethi enkulu kunazo zonke yase-UK, i-FutureLearn.com, lubonisa ukuthi izinhlelo ze-TV esizithandayo, zingase zibe yimpendulo emigomweni yethu yomsebenzi.
Udokotela Wengqondo Yezemfundo, uDkt Kairen Cullen, uchaza ukuthi kungani ukukhangwa izici ezithile zezinhlelo ze-TV kungagqamisa indlela abantu abangaphumelela ngayo emisebenzini ethile, kusize abantu abangenaso isiqiniseko sokuthi baqale kuphi ukuze benze isinyathelo sokuqala sokushintsha imisebenzi.
Imidlalo efana nemfundo yocansi isidume kakhulu ngenxa yendlela abakhuluma ngayo ngezihloko ezinjengocansi nobulili nokwenza kube lula ukukhuluma ngayo ngokusho kuka-36% wamaBrits. Izindikimba ezifana nalezi ziyatholakala futhi emsebenzini wokuba ngumelaphi kanye nezifundo ezifana ne-Global Intimacies: Ubulili, Amandla, Ubulili kanye Nokufuduka.
Kwesinye isikhathi, umthelela wezinhlelo zakho ze-TV eziyintandokazi awubonakali kahle, njengoba kubonakala engxenyeni eyodwa kwesihlanu yabakwa-Brits ababuka Ukubulala u-Eve ngoba kubenza bafune ukuhamba umhlaba. Ngesifundo se-FutureLearn's Intro to Travel and Tourism, i-Brits ingenza lelo phupho libe ngokoqobo.
Ukujabulela umhlaba wenganekwane lapho i-Game of Thrones isethwe khona (68%) ibonisa amakhono emfundo angajwayelekile njengokukhiqiza. Intshisekelo ephelele yomsebenzi wokukhiqiza amafilimu, njengomphumela wokuthatha Izibani, Ikhamera, Ikhompyutha - Isenzo! Ukuthi Ubuchwepheshe Bedijithali buguqula kanjani ifilimu, i-TV, kanye neMidlalo kungaba isinyathelo sokuqala sokungena kulowo mkhakha.
Njengoba cishe imindeni eyizigidi ezingama-27 e-UK ikwazi ukuthola umabonakude*** ingasaphathwa inombolo yomakhalekhukhwini namathebulethi abantu manje abakwazi ukubuka kuwo izinhlelo ze-TV, ithonya lezinhlelo ezinalo ekuphileni kwansuku zonke licacile. Kusukela ekukhetheni imfashini kuya emculweni esiwuthandayo, kukhona okuthile kwawo wonke umuntu, okuhlanganisa izingxenye ezimbili kwezinhlanu zama-Brits abuka uDokotela Who ukuze ahlole indawo futhi angahle athole umsebenzi we-Astrobiology ophumelelayo ngokuthatha isifundo se-Life on Mars.
U-Astrid deRidder, Umqondisi Wokuqukethwe kwa-FutureLearn, uthe: “Kwa-FutureLearn, umgomo wethu uwukuguqula ukufinyelela emfundweni. Amaphrojekthi afana nalena agqamisa ukuthi imfundo, izinto ezithandwa ngabantu kanye nempilo yansuku zonke kuhambisana kanjani nokuthi ingxenye ngayinye ingaba nomthelela kanjani kwenye. Ngokuxhumanisa izinhlelo ze-TV eziyintandokazi zabantu kanye nezizathu zokuthi kungani besondela kuzo nezifundo ezingase zibe khona nezindlela zemisebenzi kukhombisa abantu abangabaqeqesha futhi basebenze endaweni abayithanda ngempela.”
UDkt Kairen Cullen, Isazi Sezengqondo Esibhalisiwe (Ezemfundo), uthe: “Isiko elidumile, njengoba liboniswa ezinhlelweni ze-TV, livame ukubonakala ezinqumweni zokufunda ezikhuthaza abantu kanye nasezinqumweni zezemfundo abazenzayo. Izindlela zokubuka i-TV zansuku zonke zabantu ngabanye zinikeza ukuqonda okuwusizo mayelana nezinketho zemisebenzi ezingase zibe khona kubo. Izinga lezi zintandokazi ezigqamisa ngalo izithakazelo zabantu kanye nemisebenzi ekhethwayo nemisebenzi izohluka phakathi kwabantu kodwa kuwumsebenzi owusizo ukukhanyisela lesi sinqumo sokuzijabulisa nokusebenzisa esikutholayo ekucabangeni izifundo ezihlukene nokukhetha imisebenzi yesikhathi esizayo.”
Imfundo Ubuchwepheshe Ezokuvakasha
Iqhaza Lokushintsha Kwesimo Sezulu Manje Ekwenyuseni Izilinganiso Zokungezwani Nomzimba
Amathrendi eMakethe Yamashubhu Enziwe Ngabadlali Ababalulekile, Qeda...
Abantu baseRussia abasebasha baphikisana nokuhlasela kwe-Ukraine